जेठ १ – बाहुबली भारतमा सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने फिल्मको सूचीमा शीर्ष स्थानमा परेको छ तर यसले संसारको रेकर्ड भने तोडेको होइन । बाहुबली हलिउडका यी फिल्मबाट अहिले पनि निकै टाढा छ र उनीहरुसँगको टक्करमा निकै पछाडि छ ।
१. बाहुबली टुः
बाहुबली टु ले विश्वव्यापी रुपमा १२ सय करोड भारुको व्यापारा गरेको छ । यो पहिलो भारतीय फिल्म हो जसले कमाईको मामलामा बलिउडको हरेक फिल्मलाई नमज्जाले पछारेको छ । यो फिल्मले २ हजार करोडसम्मको कमाई गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
हलिउडको फिल्म अवतारले सन् २००९ मा १७,९३२ करोडको व्यापार गरेको थियो । यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने फिल्म हो । यो फिल्मले बाहुबली टु को प्रतिस्पर्धामा १८ गुणा बढि कमाई गरेको थियो । अवतारको कमाईको रेकर्ड अहिलेसम्म कुनै पनि फिल्मले तोड्न सकेको छैन ।
लियोनार्डो डिक्याप्रिया र केट विन्सलेटको फिल्म टाइटानिक कमाईको मामलामा अहिलेसम्म पनि दोस्रो स्थानमा छ । फिल्मले विश्वव्यापी रुपमा १४ हजार ६५ करोडको व्यापार गरेको थियो । यो फिल्म विश्व प्रसिद्ध टाइटानिक जहाज डुबेको वास्तविक घटनाको आधारमा बनाइएको थियो ।
४. द सिक्रेट लाइफ अफ पेट्सः
हलिउड फिल्म द सिक्रेट लाइफ अफ पेट्सले विश्वव्यापीरुपमा ५,६३० करोडको व्यापार गरेको थियो । यो फिल्मले कमाईको मुद्दामा शीर्ष ५० मा स्थान ओगटेको थियो । यो एनिमेटेड फिल्म जनावरको जिन्दगीमा बनेको छ ।
ओस्कर विनिङ एनिमेटेड फिल्म जूटोपियाले विश्वव्यापी रुपमा ६, ५८४ करोडको व्यापार गरेको थियो । यो फिल्मले पनि कमाईको मामलामा शीर्ष ५० मा स्थान बनाएको थियो ।
६. फास्ट एण्ड फ्यूरियस एटः
विन डीजलको फिल्म फास्ट एण्ड फ्यूरियस एटले विश्वव्यापी रुपमा ७, ५०२ करोडको व्यापार गरेको छ । फिल्ममा जेसन स्थेटम, ड्वेन जोन्सन, विन डिजेल र चर्ली थेरोनको भूमिका रहेको छ ।